ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ဦးဇင်ဝိုင်းအား လက်ရှိပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းမှ အသိအမှတ်မပြု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ဦးဇင်ဝိုင်းအား လက်ရှိပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းမှ အသိအမှတ်မပြု
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ဦးဇင်ဝိုင်းအား လက်ရှိပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းမှ အသိအမှတ်မပြု
Posted by က်ိုကိုအိုဗာ on Mar 30, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
မတ်လ၂၃ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အမှုဆောင်သစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲတွင် အများဆန္ဒနှင့်အညီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည့် ဥက္ကဌသစ် ဦးဇင်ဝိုင်းအား လက်ရှိပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းမှ အသိအမှတ်မပြုသည့်အပြင် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခင်ဥက္ကဌဟောင်းဖြစ်သူ ၀န်ကြီးဦးကျော်ဆန်း၏လူရင်း ဦးမြင့်သိန်းဖေမှာ ဥက္ကဌအဖြစ် ပြန်လည်ရွေးကောက်မခံရသည့်အတွက် ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းတစ်ယောက် အလွန်အမင်း မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြောင်းနှင့် အဆိုပါအမှုဆောင်ကော်မတီသစ်ကိုလည်း ကန့်ကွက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စည်းကမ်းပြည့်ဝပြီး ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ဦးဆောင်ချီတက်နေသည်ဟုဆိုသည့် တည်ဆဲအစိုးရထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သည် ဤအမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲငယ်တစ်ခု၏ရလာဒ်အတွက် ဤကဲ့သို့ သဘောထားသေးသိမ်ညံ့ဖျင်းစွာ တုန့်ပြန်သည်ကိုတွေ့ရှိရသောအခါ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်နေသည့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးလမ်းစဉ်မှာ သံသယရှိဖွယ်ကောင်းနေပြီး အဆိုပါဝန်ကြီး၏လုပ်ရပ်သည် ကျင်းပခဲ့ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် မသမာမှုများစွာကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို ပိုမိုထင်ရှားအောင် မီးမောင်းထိုးပြသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားစေပြီးလျှင် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ထပ်မံကျူးလွန်ရန် ၀န်မလေးကြောင်းကို ၎င်း၏မပြည့်ဝသော သဘောထားများက ထင်ဟပ်ဖော်ပြနေသည်ကို စိတ်ပျက်စွာတွေ့မြင်နေရသည်။
အသင်းအဖွဲ့တွေ ဟာအသင်းသားအများစု ဆန္ဒသဘောအရဆုံဖြတ်ခြင်းကသာသဘာဝကျပါတယ်
ဒါကိုဆန့်ကျင်ရင် ယုတ်ညံ့ တဲ့စိတ်ဓါတ် တွေကြောင့်ဖဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
အင်းခက်တော့ခက်နေပြီ မောင်ကျော်ဆန်းရေ။ မခံချိမခံသာဖြစ်လို့ ရမ်းတာဆိုလဲ နဲနဲကြည့်ကောင်းသင့်ပါ တယ်။ ဗလိုင်းကြီးဆိုတော့ မောင်မင်းဟာက သိသာမနေလွန်းဘူးလား။ သတိကွဲ့သတိ။ ပုတယ်ဆိုပြီး ရမ်းတိုင်းလဲမကောင်းဘူး။ ရှည်မှ လဲ မှာမဟုတ် ပု လဲအရမ်းလွန်ရင်မှောက်ရက်လဲတတ်တယ်။
အံမယ်……. သဲသဲတို့များ ရှည်ပုသီအိုရီကို ထောက်ပြပြသွားလိုက်တာ ဒိုးခနဲ ဒေါက်ခနဲ ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကျေအောင် ကျက်ထားပုံရတယ်…
မောင်ဆန်း တစ်စခန်းထလာပြန်ပီပေါ့ ခုနောက်ပိုင်းမျက်နှာပိုးသေလာပီဆိုပီး
ချီးကျူးနေတာ ၆ချိုးကတော့ မပြေတေးဘူးဘဲ
မျက်နှာပိုးသေတာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာ့အလင်း သိန်း ၈ ထောင်မှာသူမလွတ်လို့ ဒိုင်လျှိုနေတာ။ အကောင်းမအောက်မေ့နဲ့ ချာချာရေ။
ဂျပု ဂျပု တူနဲ့ထု ၊ အရပ်နဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လိုက်တယ်နော် ။ ပေမှီ ဒေါက်မမှီ
ဖွတ်လေးမောင်ကျော်ဆန်း စိတ်ကောင်းကောင်းထား၊ ထမိန်ကြီးခြုံနေလို့ မမြင်ရဖူးထင်တယ်။ ထမိန်ခြုံထဲက ထွက်ကြည့်အုံးကွဲ့။
မင်းတို့ ဖွတ်အဆိုးရ နေ၀င်တော့မယ်။
ဖွတ် လျှပ်စစ် ၂ ၀န်ကြီးကလည်း လျှပ်စစ်တွေပိုလို့ရောင်းစားပါတယ်ပြောပြီး ခု မီးတွေက ခဏခဏပြတ် နရင်းအုပ်ချင်တယ်။
ဖွတ်ကာကွယ်ရေးချုပ်ကလည်း သူ့အလှည့်ရောက်ပြီဆိုပြီး တော်လှန်ရေးနေ့မှာ ပြောချင်ရာတွေပြော။
ဖွတ် လွှတ်တော် န ယက ကတမျိုး။
ဖွတ်လယ်ဆည် ၀န်ကြီးကလည်း မိုက်ခဲ ပဲ။ ဘယ်ခွေးလူထင်ရမလဲဆိုပြီး ဖွတ်လွှတ်တော်ထဲ မူးပြီးရမ်း။
ဟိုကောင် ဖွတ် ရွှေမန်းကလည်း အသားလိုလို့ အရိုးတောင်း သူ နိုင်ငံရေးပင်စင်ပိုလိုချင်တာနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို လစာအတင်းထိုးကျွေး။
မင်းတို့ဖွတ်တွေ တကောင်မှ မကောင်းပါဘူး။ ရုပ်ရည်တွေရော ကြည့်အုံးမလား။ ကျက်သရေ တစက်မှမရှိတဲ့ကောင်တွေ။
အင်း။ ဖွတ်တွေဆိုတော့ မင်းတို့ ထမင်း ၀၀ စားထားလို့ကြိမ်းလို့ မတော်ဘူးထင်တယ်။ဒင်းတို့ကဘာစားတာပါလိမ့်။ အဲလေ ဘာစားစား ၀အောင်သာစားထားကြ။ ဒါဘဲ။
သူ့ ထက် အရပ်ပိုမြင့်လို့များလား
There is no invented medicine to cure the jealously since beginning of mankind. Especially for those kind of selfish people like “Kyaw San”.
မင်းလိုကောင် တောင်အများသဘော နဲ.ဝန်ကြီးလုပ်တာလား
How about belief what they are going to democracy.